Articles tagged 'sri lanka'
Zim stun Sri Lanka 18 January 2018 HARARE - Sikandar Raza put in a man-of-the-match performance as Zimbabwe beat Sri Lanka by 12 runs in the second match of the ODI tri-series at the Shere Bangla National Stadium in Mirpur, Dhaka, Bangladesh yesterday. The right-handed batsman scored a whirlwind and unbeaten 67-ball 81 batting ...
Zim excites in defeat 19 July 2017 HARARE - Zimbabwe cricket team pushed Sri Lanka deep into the twilight overs of the day and can still exit Asia with their heads held high despite the four wicket defeat on the last day of the Hero Cup Test match at Ramasinghe Premadasain Stadium in Colombo yesterday. That it had their match t...
Zim in historic win over Sri Lanka 11 July 2017 HARARE - The Zimbabwe cricket team made history by clinching their first ODI series 3-2 away to Sri Lanka after yesterday's tense three-wicket triumph in the final match in Hambantota. This was Zimbabwe's first series win against a Full Member since 2001 when they beat New Zealand. Zimbabwe...
Zim chase series win 10 July 2017 HARARE – The Zimbabwe cricket team is chasing a rare ODI series win against a higher ranked team besides Bangladesh when they take on Sri Lanka in Hambantota today. Zimbabwe's last series win over a top Test-playing nation was way back in 2001 when the side beat New Zealand 2-1. Since then,...
Ervine fifty helps Zim draw level 9 July 2017 HAMBANTOTA - Batsman Craig Ervine hit a quickfire 69 to help Zimbabwe pull off a four-wicket victory over Sri Lanka in the rain-shortened fourth one-day international and level the five-match series at 2-2 in Hambantota yesterday. Chasing a Duckworth-Lewis revised target of 219 in 31 overs, Zi...
Zim out to level series 8 July 2017 HARARE - The Zimbabwe cricket team took a day off training yesterday to psyche up for this morning's must-win ODI match against Sri Lanka in Hambantota. Zimbabwe need to win today's match in order to save the series as they currently trail 2-1 with two matches to go. On Thursday, the touris...
Mire ton flattens Sri Lanka 2 July 2017 HARARE - Opening batsman Solomon Mire scored his maiden ODI hundred as Zimbabwe became the first team to successfully chase a total over 300 against Sri Lanka in Galle on Friday. Sri Lanka won the toss and set a competitive total of 315/5 after 50 overs but the tourists were able to chase it d...
Recalled Wellington Masakadza injured 29 June 2017 HARARE – Zimbabwe off-spinner Wellington Masakadza was recalled for the One Day International series against Sri Lanka but then suffered an ankle injury in training ahead of tomorrow's first encounter in Galle. The tourists, who are also coming in from limited overs series in Scotland and Neth...
Zim to take on Netherlands 13 April 2017 HARARE - The Zimbabwe cricket team will take on Associate side Netherlands in three ODIs in June as the side secures more valuable game time this season. Already, Zimbabwe is scheduled to tour Scotland where they are set to play two ODIs against the Associate nation before travelling to Sri La...
Zim to tour Sri Lanka 23 March 2017 HARARE - Zimbabwe's cricket team will get the much-needed game time after they were invited to tour Sri Lanka in June later this year. With the leading cricket nations not keen to tour Zimbabwe, Heath Streak's side is always short of game time. Zimbabwe Cricket (ZC) chairperson Tavengwa Muk...
End of the road for Zim 12 February 2017 HARARE - Zimbabwe ladies cricket team will be hoping for a miracle to dispatch leaders India by a wider margin in their last match of the ICC Women's World Cup Qualifiers after going down by eight wickets against hosts Sri Lanka in Colombo yesterday. Needing nothing short of a victory while al...
Zim ready for spin test 2 February 2017 HARARE - Zimbabwe senior women cricket team coach Trevor Phiri is optimistic the warm-up games against South African sides have addressed their deficiency of playing against spin attacks. The experience will come in handy when the team takes part in the 10-team ICC Women's World Cup qualifiers...
I'm a good captain - Mayers 1 February 2017 HARARE - Zimbabwe captain Sharne Mayers says she is up to the challenge after she was thrust into the spotlight to lead the side at the ICC Women's World Qualifiers in Colombo, Sri Lanka. Zimbabwe are in Group A together with India, New Zealand, Ireland, Thailand and hosts Sri Lanka. The to...
Zim cricket reaches milestone 30 October 2016 HARARE - Zimbabwe will reach a milestone of 100 Test matches when they take on Sri Lanka this morning at Harare Sports Club. There is also another possibility of Zimbabwe capping their 100th Test player with seamer Taurai Muzarabani, Tarisai Musakanda (batsman) and Carl Mumba (medium seamer) a...
Streak's reign begins 28 October 2016 HARARE - New Zimbabwe cricket coach Heath Streak will lead the country for the first time when the hosts take on Sri Lanka in the first Test at Harare Sports Club starting on Saturday. Streak, a former Zimbabwe Test captain and assistant coach, was appointed earlier this month to take over fro...
Will 100th Test be lucky match? 28 October 2016 HARARE - The Sri Lankans are in town and while most fans are debating how long Zimbabwe will last, only a handful of supporters are aware that Zimbabwe will be playing their 100th Test match when they take to the field for the first of two matches on Saturday at Harare sports Club. Sri Lanka h...
Injury-hit Sri Lanka jet in 26 October 2016 HARARE - Sri Lanka coach Graham Ford said injuries to key players have dealt a heavy blow to his side ahead of the two-Test match series against Zimbabwe. The series gets underway at Harare Sports Club on Saturday and the Asians arrived in the capital last night without their captain Angelo M...
Zim Test squad: No real surprises 21 October 2016 HARARE - Zimbabwe Cricket (ZC) sprung no major surprises when they announced a 20-man squad to face Sri Lanka in a two-match Test series which starts on October 29. Pace bowler Carl Mumba deservedly got a call up, while the impressive Tarisai Musakanda has also been drafted into the squad, and...
Mpofu named in Test squad 20 October 2016 HARARE - Zimbabwe Cricket has named a 20-member squad for the two-match home Tests series against Sri Lanka, with the first match scheduled to begin on October 29, at Harare Sports Club. Matabeleland Tuskers' seamer Chris Mpofu was named in the squad following his impressive bowling display i...
Sri Lanka development side romp to victory 1 September 2016 HARARE - Zimbabwe Development cricket side succumbed to the visiting Sri Lankans by five wickets on the fourth and final day of their encounter that ended at Harare Sports Club yesterday. The visitors needed only up until lunchtime to wrap up the match as a contest despite being packed back by...
Zim back on Test rankings 23 August 2016 HARARE - Zimbabwe bounced back on the International Cricket Council (ICC) Test rankings after the two-match defeat against New Zealand in Bulawayo earlier this month. The team, whose last Test was way back in November 2014, had been temporarily removed from the rankings owing to having played ...
Clinical Proteas silence critics 24 March 2015 HARARE - South Africa shrugged the proverbial monkey off their backs in fine style when they sent Sri Lanka crashing out of the World Cup with an all-round clinical performance at the Sydney Cricket Ground (SCG) in front of a 27 000 stunned crowd yesterday. So many questions, theories and sugg...
Zim stun Sri Lanka 12 February 2015 LINCOLN - A Hamilton Masakadza ton led Zimbabwe to an upset victory over Sri Lanka in both teams' final warm-up before the World Cup, running down Sri Lanka's 279 with seven wickets in hand and 4.4 overs to spare.Masakadza remained unbeaten on 117 from 119 balls, having forged hundred-stands with...